ခက်ဦး | MoeMaKa Burmese News & Media
>Gaddafi captured in hometown Sirte
>Burmese in Maesot protest for DASSK Freedom
>Cartoon Gyaw Dee - peace
>Looking Back 2009 - May news headline &amp; photo
Posts Tagged ‘ ခက်ဦး ’
ခက်ဦး ● ကြိုးများ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၉၊ ၂၀၁၇ ဟောဟိုမှာကြည့် လူစင်စစ်ကရုပ်သေးလေးလိုက ဆိုင်းချက်စေစားရာမှာမြူးမြူးကြွ က က က ကြာကြာကြည့်တော့ လက် ခေါင်း ပုခုံးထက် ကြိုးများတကယ်ဆွဲထားသလားထင်လာရ ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းသဘောကျ...
ခက်ဦး – အညံ့စားရုပ်ရှင် (မိုးမခ) မတ် ၁၇၊ ၂၀၁၇ အလွဲတုအလွဲယောင်တွေမှန်း တည့်တည့်ကြီးသိပါလျက်နဲ့ အောင့်သက်သက်ကြည့်ကြည့်နေရ ပျင်းစရာကွယ် ။ ၁၅ . ၃ . ၂၀၁၇ Tags:...
ခက်ဦး – ​သေတမ်းစာ
ခက်ဦး – သေတမ်းစာ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ အုတ်ခဲလောက်မှ မနီရဲသေးသမျှ ဘယ်သွေး….မှ သွေးမစစ်ဘူးတဲ့… တက္ကစီဆရာလေး.. ရေးသွားခဲ့ပြီ………။ ခက်ဦး ၃၁ . ၁ . ၂၀၁၇...
ခက်ဦး ● ငှက် (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၆ ကိုယ်ထည်ထက် အတောင်ပံ ကျယ်မှ သန်မှ ပျံနိုင်လိမ့်မယ် ခက်ဦး ၆ . ၁၂ . ၂၀၁၆ Tags:...
ခက်ဦး – မြည်သံစွဲ ရွှေဝါရောင်
Than Htay Maung ခက်ဦး – မြည်သံစွဲ ရွှေဝါရောင် (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၆ မျက်ရည်ယိုမီးခိုးလုံးတွေကြား စီတန်းကြွလာတဲ့အသံ ပေတရာလမ်းများထက်၂၀၀၇ ၂၆ စက်တင်ဘာ ငွေကြာရံ တုတ်ရိုက်သံ...
ခက်ဦး – ငှက်
Than Htay Maung ခက်ဦး – ငှက် (မိုးမခ) သြဂုတ် ၁၃၊ ၂၀၁၆ အဆုံးနှစ်ပြီး ဘဝလေးထအပျံမှာ နားထဲပြိုရင် ရင်ထဲငိုဖို့ အသံ… အသံတွေ….. ချန်ထားခဲ့တော့တယ်………. ။...
ခက်သီ – လူ့အခွင့်အရေး ရှုဒေါင့်
ခက်သီ – လူ့အခွင့်အရေး ရှုဒေါင့် (မိုးမခ) ဇွန် ၄၊ ၂၀၁၆ အသားထဲက လောက်ဟာ အသားကုန်ရင် လောက်အချင်းချင်းကိုက်မှာပဲ ပူစီဖောင်းလို ဖောက်ခနဲ ဖောက်ခနဲ ကွဲထွက်ကြ လျော့ရဲလာတဲ့အာပေါလည်း ယိုစီးထွက်တော့...
ခက်ဦး – မိုး
ခက်ဦး – မိုး (မိုးမခ) မေ ၂၅၊ ၂၀၁၆ … ဆင်းချိန်တန်ပလားဆို အုပ်ဖွဲ့ရတာနဲ့ ခြိမ်းခြောက်ရတာနဲ့ တံမြက်လေကြမ်း ကြိုသရမ်းရတာနဲ့ အပါးသိပ်ဝတယ် ။ ………. ၁၉ . ၅ ....
ခက်ဦး – အကယ်ဒမီရှော့
ခက်ဦး – အကယ်ဒမီရှော့ (မိုးမခ) ဧပြီ ၅၊ ၂၀၁၆ အယောင်ဆောင်နိုင်ခဲ့သူတွေဟာ အဆောင်အယောင်တွေကြားပြိုးပြက်ကာ သာသာယာယာ … Tags: ခက်ဦး Related posts ခက်ဦး ● ကြိုးများ (0)...
ခက်ဦး – ဗုံ (မိုးမခ) မတ် ၃၊ ၂၀၁၆ သားရေပိတ်အကျက်ခံ ငယ်ထိပ်အနှက်ခံမှ ကိစ္စပြီးမတဲ့လား … … မလိုချင်ဘူး ပင်စည်ခေါင်းအတိုင်း တောင်စောင်းကသာ ကန်ချလိုက်ပါ ။ ရင်ကွဲသေပစေ ဇာတ်သိမ်းလိုက်မကွဲ့...
ခက်ဦး – စနေတစ်နေ့ ဆရာမြနှင့် စာဖတ်သံများ
ပန်းချီ မုတ်သုံ ခက်ဦး – စနေတစ်နေ့ ဆရာမြနှင့် စာဖတ်သံများ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၆ ဆရာမြသန်းတင့်ရဲ့ပုံတစ်ပုံ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာတွေ့လိုက်ရသည် ဆရာမြသန်းတင့်ချစ်သူများဆိုတဲ့ ဂရုတစ်ခု ဆက်တွေ့ရပြန်သည် ။ လွန်ခဲ့သော ၁၈နှစ်ခန့်က...
ခက်ဦး – ပါဂျောင် (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၆ သွေးစီးကြောင်း မဟုတ်ခဲ့ မီးမောင်း သာဖြစ်ရဲ့ အာသံကုန်းထက်က မငြိမ်းတဲ့ ကြယ်တွေ ။ (၁၃ . ၂ . ၂၀၁၆)...
ခက်ဦး – သမိုင်းစက်လက် သွေးနေ့ရက်များ
ခက်ဦး – သမိုင်းစက်လက် သွေးနေ့ရက်များ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၆ တဖျပ်ဖျပ်ခတ်ချ မျက်မွှေးမျက်တောင်တွေထဲ ညည်းတွားသံ ကျုံးဝါးသံ ကျိန်စာတိုက်သံ ရိုက်နှက်သံ ထုကြိတ်သံ နင်းချေသံများ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်စုသွား လက်သီးများ...
ခက်ဦး – သမီးစကား – ၂
Ni July – Illustration ခက်ဦး – သမီးစကား – ၂ (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ၂၄၊ ၂၀၁၅ မောမောနဲ့ ကျောပိုးအိတ်ပိုက် ထိုင်ချ စကား စပြောတယ် သမီး...
ခက်ဦး – သမီးစကား
(၂၀၁၅ ဒီဇင်ဘာ ၆ အတွက် ဂူးဂဲက မြန်မာပြည်အမျိုးသားနေ့ပုံ မြန်မာဆိုက်မှာ တင်ပေးထားပုံ) ခက်ဦး – သမီးစကား (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၅ ဒီနေ့ သမီးသူငယ်ချင်း အိသူလှိုင် စာဖြေတာ မှားလာတယ်...
ခက်ဦး – ကဗျာဆရာမောင်နီမွန် နှစ်နှစ်ကာကာပြုံးလိုက်တဲ့ ညနေ
ခက်ဦး – ကဗျာဆရာမောင်နီမွန် နှစ်နှစ်ကာကာပြုံးလိုက်တဲ့ ညနေ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၅ မောင်နီမွန်တဲ့။ သူ့ရဲ့ ၁၉၅၈ မှသည် ၂၀၁၅ အထိ ကဗျာအားဖြင့်ဖြတ်သန်းမှုဆိုတာကြီးက မင်သက်မိအောင်အံ့သြစရာ၊ ကဗျာ ကဗျာ...
ခက်ဦး – နန်းတွင်းကား ကြည့်ခြင်း
ခက်ဦး – နန်းတွင်းကား ကြည့်ခြင်း (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၅ ”အရှင့်အတွက်ဆို မီးပုံထဲလည်း ခုန်ချပါ့မယ်” တဲ့ အဲ့လို ဇာတ်လိုက်ကျော်တွေနဲ့ “မင်းမဟုတ်တာ ငါဖော်လိုက်မယ်” “အေး...
ခက်ဦး – နိုဝင်ဘာ ၈
Illustration – Joker ခက်ဦး – နိုဝင်ဘာ ၈ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၅ ၇၀ ကျော်အရွယ် ခေါင်းရွက်ဈေးသည် အမေအိုကြီး ”ကျုပ် ၅နာရီကတည်းက စောင့်ခဲ့တာ ပေးပြီးပြီတော်...
ခက်ဦး – မင်္ဂလာဆောင်
ခက်ဦး – မင်္ဂလာဆောင် (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၅ စိန်ရောင် ပလက်တီနမ်ရောင် တဖျပ်ဖျပ် အပြုံးတု အပျော်တုတွေ တဖျပ်ဖျပ် လေးစားမှုအတု အကြောက်အတု ဖော်ရံသင်းပင်းအတု စေတနာအတု စကားလုံးအတု ရယ်သံအတု...
ခ က် ဦး– တိ ရ စ္ဆာန် ရုံ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၅ လူစည်တဲ့အခါ နှာမောင်းမြှောက် ရှိခိုးပြဖို့ ဆင်တွေနဲ့ အသင့်စားအသားစိုရဖို့...